Madheshvani : The voice of Madhesh - News Portal- एमाले लेखा आयोगमा डा.कँडेलको ह्याट्रिक !
काठमाडौं, १४ मंसिर । नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय लेखा आयोगको अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएसँगै प्रा.डा. पुष्पराज कँडेले एउटै पदमा लगातार तेस्रो पटक (ह्याट्रिक)को रेकर्ड कायम गरेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ३० वर्ष प्राध्यापन गरेका कँडेल केपी ओली नेतृत्वको पचिल्लो सरकारमा ३९ महिना राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिए ।
लेखाआयोग नेकपा एमालेको आर्थिक अनुशासन कायम गराउने शक्तिशाली आयोग हो । यसले पार्टीको आर्थिक अनुशासन र नियमनकारी निकायको भुमिका निर्वाह गर्दछ । पार्टीको पाँचौ महाधिवेशनबाट आयोगको सुरुवात भएको हो ।
पार्टीको लेखाप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि तत्कालिन महासचिव मदनकुमार भन्डारीले आयोग गठन गरेको थिए । पाचौ महाधिवेशनमा तीन जनाबाट सूरु भएको सो आयोग दशौ महाधिवेशनमा पुग्दा २५ सदस्यीय पुगेको छ ।
सो आयोगका अध्यक्ष पार्टीको स्थायी कमिटीको सदस्य र आयोगका सदस्यहरु केन्द्रीय कमिटी सदस्य सरहको मान्यता हुन्छ ।